Sheekh Shariif & Wakiilka QM oo ka wada hadley doorashada Galmudug – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sheekh Shariif & Wakiilka QM oo ka wada hadley doorashada Galmudug
Ardaan Yare 30 January 2020
Kulan ay ku yeesheen Magaalada London ee dalka Ingiriiska Madaxweynihii hore ee dowaldii KMG aheyd ahna Hogaamiyaha Madasha Xisbiyada Qaran Sheiekh Shariif Sheekh Axmed iyo Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobey Ambassador James Swan ayaa looga hadley arimo badan.
Labada dhinac ayaa waxaa ay ka wada hadleen Doorashada Galmudug in ay noqoto mid howlaheeda loo wada dhan yahay,Qabsoomidda doorasho waqtigeeda ku dhacda oo heshiis lagu wada yahay Iyo sidii xal loogu heli lahaa khilaafka u dhaxeeya Dowladda Federaalka iyo Maamul Goboleedyada.
Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobey Ambassador James Swan ayaa sheegay in dhamaan saamileyda Siyaasadda Somaaliya looga baahn yahay inay kaalin mugleh ka qaataan sidii xal looga gaari lahaa Arrimaah doorashooyinka.
Dhageyso:-Deni oo ku baaqay in dagaal dhaqaale lala galo Al-Shabaab
Kulamo lagu xalinayo Dowladda federaalka & Puntland oo bilaawdey